Fomba ara-dalàna hampiasaina amin'ny Adobe Portfolio Free [Version Malagasy]
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Maimaimpoana ny Adobe Portfolio [Version Malagasy]
Maimaimpoana ny Adobe Portfolio
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-10, Malagasy Blog
Amin'ny fampiasana tranokala Adobe Portfolio maimaim-poana, tsy mila mianatra fiteny famoahana HTML na CSS ianao, niasa mafy ireo mpamorona mba hamolavola ireo dingana rehetra ho anao. Ny sisa ataonao dia ny maka ny sasany amin'ireo singa famolavolana marina amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo amin'ny faritra manokana.
Raha olona mamorona ianao dia mety mila manana portfolio tsara tarehy sy am-boalohany. Na izany aza, ny rindrambaiko mamorona tranokala kalitao dia mety handany vola be raha tsy miresaka momba ny Portofolio Adobe. Ny tena izy dia, rehefa mividy fampiharana tokana na drafitra fampiharana rehetra ianao dia mahazo Adobe Portfolio FREE. Tsy midika akory izany fa mila mividy ny iray amin'ireto drafitra Adobe ireto ianao, afaka manandrana ny kinova Adobe Portfolio Free Trial ary manandrana portfolio cloud mamorona.
Tombontsoa maimaim-poana amin'ny Adobe Portfolio
Tsy mila fahalalana momba ny fiteny fandaharana
Safidy maro karazana sy modely
Fanavaozana matetika sy fanohanana ara-teknika
Afaka miasa miaraka amin'ireo rindrambaiko Creative Cloud hafa
Tsy mila sarany fanampiny
Afaka mahazo fihenam-bidy amin'ny drafitra voafantina ve aho?
Eny, malala-tanana ny orinasa Adobe ary manana tolotra tsara be ho an'ny mpianatra, mpampianatra ary orinasam-pandraharahana.
Inona ny sasany amin'ireo fiasa izay miaraka amin'ny Adobe Portfolio?
Mamorona layout Cloud Portfolio Creative, hahazo fitaovana sy fiasa am-polony maro ianao, eo no hahitanao azy: Fandaharana kanto, famolavolana fanao malefaka, famolavolana mamaly, mifandrindra am-pilaminana amin'ireo tetikasan'ny Behance.
Tranonkala inona no azoko foronina amin'ny Adobe Portfolio?
Avy amin'ny zavakanto, sary, sary, volavolan-tsary, lamaody, maritrano, sary mihetsika hatramin'ny famolavolana tranonkala sy maro hafa. Azonao atao ny mampakatra ny sarinao ao amin'ny tranokala Adobe Portfolio ary mametraka fiaviana famoronana samihafa.
HAHAZO 10 MAFY ADOBE STOCK
Ohatrinona ny vidin'ny famandrihana Portfolio?
Hahazo maimaim-poana amin'ny Adobe Portfolio ianao, amin'ny fisafidianana ny famandrihana Adobe Creative Cloud All Apps izay mitentina $ 52,99 na ny Single App amin'ny vidiny $ 20,99.
FANONTANIANA ADOPBE CREATIVE CLOUD
Ahoana no ifandraisan'ny Behance sy ny portfolio?
Mety hahita tabilao fampitahana Behance vs Adobe Portfolio maro ianao, satria samy hafa tanteraka izy ireo, fa raha mampifandray azy ireo ianao, dia azonao antoka fa hahatratra valiny lehibe. Voalohany, mamorona tranokala mampiasa Portfolio ianao, avy eo mampifandray ireo serivisy roa ary ataovy hitan'ny mpijery an-tapitrisany ny tranokalanao.
Maninona aho no tsy afaka misintona Adobe Portfolio ary mampiasa azy io maimaim-poana?
Adobe Portfolio dia serivisy an-tserasera ary amin'ny alàlan'ny kinova ofisialin'ny Creative Cloud ihany no azo idirana. Ny tranokala, ny layout ary ny portfolio-nao novolavolaina tamin'ity sehatra ity dia voatazona amin'ny fampiantranoana manokana izay mila andoavanao vola tsy tapaka. Ka ny hany fomba fampidinana maimaimpoana ny Adobe Portfolio dia ny fahazoana ny kinova andrana amin'ny Creative Cloud.
3 Alternative Adobe Portfolio Alternatives tsara indrindra
Raha tsy mety aminao ny Adobe Portfolio noho ny antony sasany, avo loatra ny vidiny na ny fahafaha-miasa misy tsy manome fahafaham-po ny filanao, azonao atao ny manandrana mampiasa sy manandramana safidy hafa maimaim-poana Adobe Portfolio.
MAMPIASÀ MURAL MAIMAIMPOANA
Modely maimaim-poana maro
Ny kinova maimaim-poana dia voafetra amin'ny fampiasa
Mural dia iray amin'ireo serivisy mora indrindra azonao ampiasaina hananganana ny portfolio. Izy io dia manana fanaraha-maso mety, ary ny tena zava-dehibe, tsy toy ny rindrambaiko Adobe Portfolio fa tsy dia be loatra amin'ny karazana fiasa, plug-in samihafa, ka manahirana ny fizotrany ho an'ny vao manomboka. Azonao atao ny maka layout efa vita avy amin'ny fanangonana ary manitsy azy hifanaraka amin'ny fombanao.
Mural dia mpanamboatra portfolio tsara ho an'ny mpanoratra, mpanolo-tsaina, manam-pahaizana momba ny marketing, mpitantana vokatra, mpampiasa vola ary siantifika.
MAMPIASÀ WIX MAIMAIMPOANA
Safidy fisintonana marani-tsaina
Manohana plug-in video sy audio
Somary sarotra ho an'ny vao manomboka
Wix dia mifantoka amin'ny famoronana tranokala malalaka kokoa. Ireo lehilahy ireo dia mamela anao hamorona tranokala misy karazana karazany rehetra, noho izany, amin'ny alàlan'ny fisafidianana am-pitandremana, dia tena azo atao ny maka tahaka ireo tranonkala Adobe Portfolio tsara indrindra miaraka amin'ny portfolio, na ho an'ny mpaka sary na mpamorona tranonkala.
Wix dia manolotra maodely miavaka maherin'ny dimanjato noforonin'ireo mpamorona mpitarika, ary koa fanangonana Widget galeriana efapolo samihafa hanehoana ny portfolio-nao. Fanampin'izay, manohana horonantsary sy feo izy io.
MAMPIASÀ FABRIK MAIMAIMPOANA
Fandaminana azo ekena tanteraka
Ny sehatra Fabrik dia manasongadina ireo fiasa lehibe indrindra momba ny fampisehoana ny sarinao - endrika kanto miaraka amina endrika maoderina mba hanatsarana ny fahitana ny portfolio-nao. Ny lohahevitra rehetra dia misy fiasa misongadina izay ahafahanao manova ny layout, ny loko ary ny zavatra amin'ny endrika.
Na eo aza ny zava-misy fa Fabrik dia sehatra misy karama, azonao atao ny mampiasa ny fitsarana maimaimpoana mandritra ny 14 andro.
Mampiasà Adobe Portfolio Free
Mampiasà ADOBE PORTFOLIO MAIMAIMPOANA
Misafidiana iray amin'ireo drafitra ary ampiasao ny kinova fanandramana maimaimpoana an'ny editor Adobe Portfolio hizaha toetra sy hamoronana ny portfolio-nao ho an'ny tranonkala.
Tombony azo amin'ny Adobe Portfolio maimaim-poana
Mampiasà Adobe Portfolio maimaim-poana